10 Amadolobha Amahle Asendulo Okuvakashelwa Emhlabeni Wonke | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Amadolobha Amahle Asendulo Okuvakashelwa Emhlabeni Wonke
Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi China, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izikhangibavakashi Europe
(Kugcine ukubuyekezwa On: 11/09/2021)
Kuzungezwe imvelo enhle kakhulu, okungathintwanga yisikhathi, kukhona 10 emadolobheni asendulo amahle kakhulu ukuwavakashela emhlabeni wonke. Ukusuka eYurophu kuya emadolobheni asendulo aseChina athakazelisayo, lolu hambo luzogcwala izinganekwane kusukela ezikhathini zasendulo kuya ezikhathini zethu.
Izitimela kuyindlela enobungane kakhulu imvelo uvakashe. Lesi sihloko sabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Ukuvakasha esenziwa Gcina Isitimela, Amanani Amasheya Esitimela Ashibhe Kakhulu EYurophu.
1. Iningi Beautiful Amadolobha Old Ukuvakashela EYurophu: UCivita Di Bagnoregio, Italy
1200 ubudala, ngemvelaphi esukela ekhulwini lesithupha leminyaka, ICivita di Bagnoregio iyona endala kunazo zonke idolobha elihle eYurophu. Uzothola le nqaba esibhakabhakeni 110 km ukusuka eRoma, ukuphumula ngasentabeni. Uma uvakashela leli dolobha elihle lamatshe ehlobo, ungahle uhlangane ne- 100 izakhamuzi ezibuyayo zizothokozela imibono emihle yesifundazwe saseViterbo.
Ngaphezu kwalokho, uzokuthola kukuthakazelisa kakhulu ukubona ukuthi idolobha likugcinile bokwakhiwa ephakathi ngemuva 2 izimpi zomhlaba, kanye nokuphazanyiswa izintaba-mlilo eziningana. Ngakho, kwenziwa imizamo emikhulu yokulondoloza leli gugu lase-Italy, ukuyigcina ingafi. Ngakho, ngaphambi kokuba inyamalale kufanele thatha isitimela uye eViterbo, kusuka eRoma Termini eholidini lakho elilandelayo lase-Italy.
IRoma iya eViterbo Ngesitimela
USiena uye e-Orvieto Ngesitimela
I-Arezzo eya e-Orvieto Ngesitimela
IPerugia eya e-Orvieto Ngesitimela
2. Amadolobha Amahle Endala Okungavakashelwa Emhlabeni Wonke: Idolobha Elidala laseRothenburg, Germany
Uma useJalimane kufanele uhambe ngomgwaqo i-Romantic Road, a 40 amaminithi’ shayela phakathi amadolobhana amahle kakhulu eJalimane. Yilapho futhi ozothola khona enye ye- 10 amadolobha amahle kakhulu ukuvakashela emhlabeni wonke, Rothenburg.
IRothenburg ob der Tauber kuyinto idolobha lomlingo lasendulo eBavaria, Germany. Izindlu zalo ezinemibala eyedlule ezinemibala egqamile zihlala zingathintwa isikhathi ngemuva kwezindonga zedolobha ezigcinwe kahle. Idolobhana lasendulo elihehayo laqanjwa ngenxa yendawo elikuyo ngaphezu komfula iTauber, indawo ehlelekile yama-celts, ekuqaleni kwekhulu lokuqala C.E. I-Plonlein kaRothenburg, Isikwele semakethe, izitaladi ezithandekayo, neCastle Gardens kuyenza ibe ngelinye lamadolobha asendulo aheha kakhulu ukuvakashela eYurophu, nasemhlabeni.
IBerlin iya eRothenburg Ob Der Tauber Enesitimela
UStuttgart uya eRothenburg Ob Der Tauber Ngesitimela
EMunich iya eRothenburg Ob Der Tauber Ngesitimela
IFrankfurt iya eRothenburg Ob Der Tauber Enesitimela
3. Idolobha Lasendulo Elihle Kakhulu Ukuvakashela Emhlabeni Wonke: UFenghuang EChina
Idolobha Lasendulo lasePhoenix, IFenghuang ingelinye lamadolobha asendulo agcinwe kahle eChina. Lapho ungena edolobheni elihle, umbono omangalisayo wamabhuloho, amathempeli, nokuphila kwamanzi kuzoziveza kuwe, phakathi kwezihlahla ezisindayo nemvelo ezungezile.
Ngomlando we 400 iminyaka, okwamakhosi akwaMing naseQing, UFenghuang, ingenye yezindawo ezingasoze zalibaleka eChina. Enye yezinto ezithakazelisa kakhulu futhi ethakazelisa ngaleli dolobha lasendulo eChina ukuthi izakhamuzi zedolobha, amaMiao namaTujia amancane, usagcina amasiko wangaphambi kwesimanje nempilo ezindlini ezindala zamapulangwe.
4. Idolobha Lasendulo laseNanjing, China
Idonga lomuzi lasendulo elikhulu kunawo wonke emhlabeni, I-Nanjing, itholakala eMfuleni iYangtze. I-Nanjing ingenye 4 izihloko zakudala eChina. Ngaphezu kwalokho, INanjing ingelinye lamadolobha asendulo amahle kakhulu ukuvakashelwa emhlabeni wonke. Lokhu kungenxa yodonga lomuzi oluhlaba umxhwele olusamile futhi luzungeze idolobha, ukuyigcina ingathintwanga yisikhathi nomlando.
Nokho, ukubukwa okuphawuleka kakhulu kweNanjing kusebusuku. Ngemuva kobumnyama, umuzi wonke ukhanyisiwe, futhi iThempeli likaConfucius elimangalisayo liheha nakakhulu. Ngaphezu kwalokho, ungavakashela ezinye izinkomba ezivela kubukhosi bakwaMing, ngekhulu le-14. Ngokwesibonelo, Mausoleum kaSun Yatsen.
5. Idolobha Elidala Kunazo Zonke Ukuvakashela EYurophu: Avignon, France
Idolobha elidala elimangalisayo lase-Avignon eProvence lakhiwa ngekhulu le-14. Leli dolobha elithandekayo lalihlala koPapa, futhi awudingi ukuba okholweni lobuKristu, ukuncoma opapa’ isigodlo se-gothic. Ngemuva kokubabaza isigodlo ungahamba ngesikebhe emfuleni iRhone omuhle kwazise u-Avignon uhlala ngasosebeni lwangakwesobunxele, noma ubheke ibhuloho elidumile laseSaint-Benezet, kusukela ngekhulu le-12.
Isikhungo sedolobha esidala sifihlwe kahle ngemuva kwezindonga ezigcinwe kahle futhi 39 izinqaba zokubuka. Ngaphezu kwalokho, uma kungenzeka uvakashele e-Avignon ngempelasonto, uzokujabulela Imakethe yangeSonto, noma ngesikhathi sasehlobo, lapho-ke uzoba nenhlanhla yokuhambela umkhosi odumile waseshashalazini wase-Avignon “e” futhi “ukuvala” ngoJulayi.
ILyon eNice Enesitimela
EParis eya e-Avignon Ngesitimela
Ngijabulele u-Avignon Ngesitimela
IMarseilles iya e-Avignon Ngesitimela
6. Idolobha Elidala Kunazo Zonke Ukuvakashela EYurophu: esetshenziswa
Ezothando, ebukekayo, nangokwakhiwa kwekhulu le-14, IBruges ingelinye lamadolobha amahle kakhulu asendulo eYurophu. Idolobha elidala elidume kakhulu eBelgium, esetshenziswa izitolo zikashokoledi, isikwele semakethe, amabhuloho, futhi isikhungo somlando wasendulo sakhanga 8 izivakashi eziyizigidi minyaka yonke.
Ngakho-ke, uzokujabulela kakhulu uma uhamba off-isizini, futhi uhlangane nendawo 120,000 izakhamizi. Ngakho, impelasonto ende izoba yinhle ukuthola leli dolobha elihle lasendulo eBelgium futhi ubabaze ngempela ubuhle obugcinwe kahle bezinganekwane.
Amsterdam eBruges With A Isitimela
IBrussels iya eBruges Ngesitimela
I-Antwerp kuya eBruges Ngesitimela
IGhent iya kumaBruges NgeSitimela
7. Amadolobha Amahle Endala Okungavakashelwa E-China: ULuoyang, China
I-Longmen Grottos nethempeli likaShaolin, kuphela 2 wezindawo ezenza idolobha lasendulo laseLuoyang libe ngelinye lamadolobha asendulo aphawuleka kakhulu emhlabeni. Uzothola isikhungo sedolobha lasendulo laseChinese Universe Luoyang, phakathi kweBeijing neXi'an, ngesitimela sezinhlamvu.
Idolobha lasendulo laseLuoyang belimi ngxi, Akuthintwanga umlando nenkambo yesikhathi, kusukela 1600 BC. Ngakho-ke, uzohlatshwa umxhwele ukubona isango elikhulu lomuzi livala impilo yedolobha. Ngaphezu kwalokho, uzohamba endaweni lapho abadayisi bokuqala bakaSilika Road badlula khona.
8. Idolobha Elidala Kunazo Zonke Ukuvakashela Emhlabeni Wonke: ePrague
Idolobha Elidala, njengoba kwaziwa ngabantu bendawo, EPrague Idolobha Elidala, iheha izivakashi kusukela ngekhulu le-9. Uzothatheka ngaleli dolobha lasendulo elihle ngokumangalisayo. Ngakho-ke, uma uthola ithuba, vakashela ePrague okungenani ngempelasonto. Ngale ndlela uzothola izizathu eziningi zokuba ngelinye lamadolobha amahle kakhulu asendulo emhlabeni jikelele.
Isikhungo esidala esinomlando sihlala enkabeni yedolobha, kuze kube namuhla, indawo yakho konke ukuphila kwamasiko. Uzobona ukuthi bonke abavakashi bahlangana bazungeze iwashi le-Astronomical njalo ngehora enkabeni.
9. Idolobha Elidala Kunazo Zonke Ukuvakashela Emhlabeni Wonke: Amsterdam
I-Amsterdam ingenye yezinto ezinhle kakhulu emadolobheni athandwayo e-Europe, futhi okukodwa okuncane kakhulu. Lokhu kusho ukuthi ungahamba kulo lonke idolobha ngezinsuku ezimbili. Nokho, what most tourists don’t know is that this Beautiful Dutch town is one of the ancient towns in the world.
Ngakho-ke, naphezu kobukhulu bayo, Idolobha lasendulo lase-Amsterdam linamabala amaningi akhethekile ozodinga isonto ukuthola. Idolobha lekhulu le-13 linamagceke amaningi acashile, iziqhingi zokuthula, noma i-Oude Kerk, isakhiwo esidala kunazo zonke e-Amsterdam, esifundeni esibomvu. Ngamafuphi, ungabona okuningi e-Amsterdam kunokwemikhumbi yendabuko uma uhlose ukuthola izindaba zayo ezihambile.
10. IPing Yao Idolobha Lasendulo EChina
Okuheha kakhulu lokhu ngedolobha lasendulo iPing Yao ukuhlanganiswa kwezitayela zokwakha. Njengoba uzulazula emigwaqweni yakudala, izindlu, amathempeli, nezindonga zomuzi zizokhuluma izindaba ze 5 amakhulu eminyaka. Lokhu kungenxa yokuthi idolobha elidala likaPing Yao lakhiwa ngekhulu le-14.
Uma uwuthanda umlando futhi uthatheka yisiko lamaShayina, khona-ke ukuhamba ngomgwaqo omkhulu wedolobha kuzoba yinto enhle kakhulu. Uzoba nesikhathi-sokuhambela inkathi lapho iPingyao yayiyisikhungo sezomnotho saseChina, futhi ubone ukuthi cishe akukho lutho olushintshile.
Leli gem lasendulo litholakala kalula ngesitimela, vele uye ePingyao Gucheng Railway Station, futhi ukusuka lapho wagibela ibhasi waya emasangweni omuzi.
Lapha ngesikhathi Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele uhambo olungasoze lwalibaleka nolwandisiwe oluya “Emadolobheni Ayishumi Ahle Kunazo Zonke Zasendulo Ukuvakashela Emhlabeni Wonke”.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Amadolobha Ahle Amahle Asendulo Okuvakashela Emhlabeni Wonke” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fancient-towns-visit-worldwide%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila yethu ethandwa kakhulu yezitimela - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, futhi ungashintsha i- / ja kuye / es noma / de nezinye izilimi.
AncientTowns AncientTownsInChina BeautifulancienttownsEurope Bestoldtownsworldwide Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Russia, Qeqesha Ukuhamba Spain, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
Isizathu Sokuba Cabanga Ukuthenga eshibhile zemininingwane Amathikithi e-Europe?